कोकाकोला कपमा होराईजन, एभरेष्ट, सिता र स्कलर्सको जित – Khel Dainik
कोकाकोला कपमा होराईजन, एभरेष्ट, सिता र स्कलर्सको जित
बुटवल (खेलदैनिक) । बुटवलमा जारी कोकाकोला कप अन्तर विद्यालय फूटवल प्रतियोगिता अन्तरगत शुक्रबार न्यू होराईजन बो. स्कुल, एभरेष्ट उ.मा.वि., सिता मा.वि. र स्कलर्स होमले जित हात पारेका छन् ।
एन्फा टेक्निकल सेन्टर, देवीनगर बुटवलमा भएका खेलहरुमा होराईजनले सिद्धार्थ इ.बो. स्कुललाई २–० ले पराजित गरेको छ भने एभरेष्टले लिटिल प्याराडाईज स्कुललाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
त्यस्तै शुक्रबार नै भएका अन्य खेलहरुमा सिता मा.वि.ले सिद्धेश्वर मा.वि.लाई १ का विरुद्ध ४ गोलले पराजित गरेको छ भने स्कलर्स होमले प्यारामाउण्ट इ.बो. स्कुललाई २–१ ले निराश तुल्यायो ।
प्रतियोगिता अन्तरगत शनिबार कान्ती मा.वि.ले जनभावना मा.वि.सँग भिड्नेछ भने होराईजन जि.बि.एस. ले मोडर्न लिटिल फ्लावर एकेडेमीको सामना गर्नेछ । त्यस्तै फ्यूचरलाईट इ.बो. स्कुलले एपेक्स स्कुल बी सँग भिड्नेछ भने दुर्गा मा.वि.ले जितेश्वरी मा.वि. (सेतो) को सामना गर्ने खेल संयोजक भुपेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री (हरि) ले जानकारी दिनुभयो ।
← डिफेन्डिङ च्याम्पियन एचएचसीए र इनोभेटिभ सेमिफाइनलमा सहारा क्लबको ऐकेडेमी भवनमा तला थप्ने काम शुरु →
रुनीको ह्याट्रिकसँगै योङ ब्वाईज सेमिफाइनलमा श्रावण १४, २०७४
रेफ्री कमिटीको उपाध्यक्षमा गुरुङ श्रावण १४, २०७४
फिफा वरियतामा नेपाल यथावत, भारतको स्थान खस्कियो श्रावण १४, २०७४
फुटसल रेफ्रीहरुलाई बेज हस्तान्तरण श्रावण १४, २०७४
फुटसल लिग खेल्न धराने टोली पोखरा आइपुग्यो श्रावण १४, २०७४
विश्व चर्चित बर्लिन म्याराथनमा महर्जनले दौडने श्रावण १४, २०७४